I-Qatar Airways Cargo iphehlelela inkonzo ezinikele eYangon
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Qatar Airways Cargo iphehlelela inkonzo ezinikele eYangon
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseMyanmar • iindaba • Iindaba zaseQatar zokuqhekeka • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Indlela yeDoha-Yangon-Doha inikezelwa kube kanye-ngeveki ngenqwelomoya iAirbus A330, ebonelela ngaphezulu kweetoni ezingama-60 zomthwalo wempahla ngendlela nganye.
I-Qatar Airways Cargo iqale ngokuhambisa ngqo i-Yangon, eMyanmar. Indlela yeDoha-Yangon-Doha inikezelwa kube kanye-ngeveki ngenqwelomoya iAirbus A330, ebonelela ngaphezulu kweetoni ezingama-60 zomthwalo wempahla ngendlela nganye.
IGosa eliyiNtloko leQatar Airways uCargo, uMnu. Guillaume Halleux, uthe: “Siyavuya ukwazisa indawo yethu yesibhozo yokuhamba ngenqwelomoya ngowama-2017, ngokuhambelana nesicwangciso sethu sokwandisa uthungelwano neenqanawa. Ukusukela inkululeko yelizwe, iMyanmar inezoqoqosho olukhula ngokukhawuleza kwingingqi ye-ASEAN, kwaye utyalomali lwangaphandle kurhwebo lwasekhaya lubone ukukhula okukhulu. Sinebhongo kakhulu ngokuba yinqwelo moya yokuqala kwilizwe liphela ukuhambisa le marike isakhulayo kunye nenkonzo yeenqwelo-moya ecwangcisiweyo njengoko sinqwenela ukuba yinkulumbuso yomboneleli weenkonzo zemithwalo yomoya kwingingqi. ”
Ukuthunyelwa kwenqwelo moya eMyanmar kunye nokungenisa elizweni kukhuphuke kakhulu ngama-87 pesenti nama-58 eepesenti kwiitoni zemetriki ukusukela ngonyaka ka-2014. Qatar Airways Cargo kungokunje inikezela ngesisu kumthamo wenqwelomoya yabakhweli mihla le ukuya eYangon. Ukongezwa kwenkonzo ezinikezelweyo yokuhambisa izinto iya kubonelela ngomthamo owongezelelweyo wokuxhasa iimpahla ezithunyelwa ngaphandle zaseMyanmar, kunye nezinye izinto eziphambili, kubandakanya imveliso entsha kunye nemveliso yokutya. Izambatho ezenziwe ngomumo zezona zinto zithunyelwa ngaphandle zivela ikakhulu eYurophu naseMelika ngokuma ngaphandle komthungo kwindawo yokuphatha imithwalo yeDoha. Le nkonzo intsha izakuququzelela ukuhanjiswa kwamayeza asuka eYurophu aye eMyanmar ngesisombululo seQR Pharma esisungulwe.
I-Asia Pacific yeyona ntengiso iphambili yemithwalo yomoya yeQatar Airways Cargo, kwaye ngokusungulwa kwenkonzo entsha yenqwelomoya eya eYangon, umphathi wenqwelomoya ukhulise uthungelwano kulo mmandla ukuya kwiindawo ezisibhozo. I-Qatar Airways Cargo ikwabonelela ngesisu esibalulekileyo kwizixeko ezingama-29 zommandla, ukubonelela ngokudibeneyo kumthamo weveki ngaphezulu kweetoni ezingama-8,000 ezivela eAsia Pacific. Umthuthi wempahla kutshanje uphehlelele inkonzo yenqwelomoya ePittsburgh, waba yinkampani yokuqala yenqwelomoya ukubonelela ngeenkonzo zokuzinikela esixekweni.
I-Qatar Airways Cargo kutsha nje yamkele iBoeing 747-8F yokuqala kunye ne-Boeing 777F yeshumi elinanye njengenxalenye yesicwangciso sayo sokwandisa isicwangciso sokubonelela abathengi bayo ngenkonzo ehleliweyo kunye ne-charter yeenqwelomoya ngeenqanawa ezincinci nezangoku. Umthuthi wemithwalo ukwanikezela ngeemveliso ezahlukileyo ezinje ngeQR Pharma, QR entsha, QR Live kunye neQR Express yokusebenza ngokukuko kunye nokuthotyelwa kokuphathwa kwamayeza ahambelana nobushushu kunye nokonakala kwezinto, ukuhanjiswa kwezilwanyana eziphilayo kunye nokuthunyelwa kwexesha elibalulekileyo.
Umntu ophethe imithwalo usandula ukufumana amabhaso amabini e-Asiya: ibhaso 'loMphathi oPhambili woNyaka' nguPayload Asia kunye 'neyona nkampani yeenqwelomoya ihamba phambili kwiiNkonzo zabaThengi' ngamabhaso e-India Cargo.